Ngaba zonke iirivethi ezingaboniyo zealuminiyam ziya kuhlwa?
Ixesha lokuposa: Jun-23-2022
Zonke iirivethi ezingaboniyo ze-aluminiyam zicotha ukugqwala, kwaye ngokubanzi sicinga ukuba akukho lula ukugrumba.Funda ngokugqithisileyo»
Zeziphi iindlela zonyango oluphezulu oluchasene nokubola kwee-rivets ezivaliweyo ze-countersunk head blind?
1. Ngokuqhelekileyo, unyango olungaphezulu lwee-rivets ezingaboniyo yi-aluminium blind rivet head polishing.2. Khetha kwaye ucoce iirivethi ezingaboniyo zensimbi engenasici.3. I-Electroplating ye-iron blind rivets, i-electroplating yahlulwe kwi-electroplating yokukhusela indalo kunye ne-electroplating eqhelekileyo.4. Kukho i...Funda ngokugqithisileyo»
Kutheni iirivets ze-aluminium zihlanjululwe kwimveliso
1. Okokuqala qiniseka ukuba usebenzisa iirivethi ze-aluminiyam zonke?Ngenxa yokuba ii-rivets ze-aluminiyam ezivulekileyo abantu bahlala bethetha ngazo ziyi-aluminiyam cap irons, kuyinto eqhelekileyo ukuba intloko ye-rivet ijikeleze i-cap kunye ne-rust emva kwe-riveting.2. Ukuba i-aluminiyam ibonakaliswe kumanzi emvula, iya kuba ngumhlwa kunye nomhlwa.Funda ngokugqithisileyo»
Kwehla umnqwazi wezikhonkwane, siyintoni isizathu?
Ixesha lokuposa: Jun-16-2022
Isizathu: iirivethi ezingaboniyo azifaneleki.Intloko ye-rivet mandrel kufuneka ibambelele kwelinye icala le-riveting plate emva kokuba yaphukile.Ukuba ikhutshwe ngokuthe ngqo, kunokwenzeka ukuba izinto eziphathekayo ze-aluminiyam yesikhonkwane zithambile kakhulu okanye ubukhulu bodonga buncinci kakhulu, kunye ne-deformation ...Funda ngokugqithisileyo»
Yintoni endimele ndiyenze ukuba i-rivet eyimfama isetyenziselwa ukuvuza kwamanzi?
1. Iirivethi ezingaboniyo azikho uhlobo lwamatywina asetyenziswayo.2. Sebenzisa iirivethi ezingaboniyo ezivaliweyo.I-3, abanye banokongeza i-pad engenamanzi.Funda ngokugqithisileyo»
Sisiphi isizathu sokukhulula i-rivets emva kokuba i-rivets eyimfama ikhutshwe xa i-aperture yokufakela kunye nobude be-interlayer budibana nemigangatho?
1. Umzimba we-nail awunwebeki, kwaye i-nail core ilahlekelwa ukuxinezeleka.2. Ubunzima bomzimba we-nail bukhulu kakhulu, amandla okutsala engundoqo we-nail mncinci kakhulu, kwaye umzimba we-nail awukwandiswa ngokupheleleyo okanye awukwandiswa ngokupheleleyo.3. Ubungakanani bentloko yesikhonkwane bukhulu kakhulu okanye i-angle ayilunganga, umphumo...Funda ngokugqithisileyo»
Loluphi unyango olungaphezulu olunokuthi luvuleleke iirivethi ezingaboniyo?
Ixesha lokuposa: Jun-08-2022
Kukho iintlobo ezininzi zonyango lwe-rivet surface engaboniyo ezifana nezi: ● Ukugalela (ukwahlulwe ngokwendalo esingqongileyo, okungesiyo indalo, okuqhelekileyo kunye nezinki ezinemibala) amaxabiso ahluke kakhulu.● Ipeyinti yokubhaka (ekwahlulahlulwe yaba kokulungileyo nokubi) ● i-passionation ● I-Nickel plated ● I-Rhombus ● Unyango olululo.Funda ngokugqithisileyo»
Uzisebenzisa njani iirivethi eziyimfama ezivulelekileyo?
1. Faka i-rivet eyimfama evulekileyo kwi-nozzle yompu kwaye uyifake kumngxuma owenziwe ngaphambili.2. Qala isixhobo kwaye utsale i-rivet eyimfama evulekileyo yokwandisa kwaye ugcwalise umngxuma wokusebenza.3. Xa umthwalo ufikelela kwixabiso elimiselweyo, i-rivet eyi-open-type blind rivet iphuka caba entloko, kwaye...Funda ngokugqithisileyo»
Indlela yokulungisa i-rivet gun eyimfama?
1. Okokuqala jonga into engalunganga ngompu we-rivet kwaye kufuneka ulungiswe.2. Ukuba ngaba isisitshi okanye isitshixo sokutyibilika, susa nje umphanda, uze usebenzise izikrweqe ezibini ezihambelanayo ukuze ukhulule umkhono wozipho, emva koko isikhonkwane esincamatheleyo singakhutshwa, siphinde sifakwe kwakhona..3. Umpu ongundoqo werivet oyimfama i...Funda ngokugqithisileyo»
Isaziso seholide yoMnyhadala weDragon Boat
Ixesha lokuposa: Jun-02-2022
I-Dragon Boat Festival ilapha!Wuxi Yuke Technology Co., Ltd. enkosi ngenkxaso yakho eqhubekayo kunye nenkampani!IiHolide ezimnandi kuwe nakusapho lwakho!Nika ingqalelo kukhuseleko xa uhamba ngeeholide kwaye uthathe amanyathelo okhuseleko!Ngokwemithetho yeholide yelizwe kunye ne-actu...Funda ngokugqithisileyo»
Indlela yokususa i-burrs kumphezulu wee-rivets ezingaboniyo?
Isonjululwa ikakhulu ngeendlela zamachiza.Inkqubo yokukhutshwa kweerivethi ezingaboniyo yindlela esulungekileyo yekhemikhali, kusetyenziswa imveliso ebizwa ngokuba yiCullygrat.Xa kuthelekiswa nendlela yesiqhelo yokukhupha imali, ilula, yonga iindleko, kwaye iyonga kakhulu abasebenzi.Umgangatho wee-rivets ezingaboniyo uphuculwe kakhulu ....Funda ngokugqithisileyo»
Kutheni iirivethi ezivulekileyo ezingaboniyo zinee-burrs xa zikhutshwa?
1. Amandla ompu we-rivet asetyenzisiweyo amancinci kakhulu.Xa utsala umpu wesikhonkwane, awunakophulwa ngexesha elinye.Ukuyitsala kabini, kathathu okanye ngaphezulu kuya kubangela i-burrs kwindawo yokuphuka.2. Iingxaki zomgangatho wee-rivets ezivulekileyo ezingaboniyo.3. Ubude beerivethi ezingaboniyo ezivulekileyo.Ukuba ubukhulu be-riveting bu ...Funda ngokugqithisileyo»
123456Okulandelayo >>> Iphepha 1/18